Haweenay Dhacdo Murugo badan Kala Kulantay Xuutiyiinta oo Xajka Lagu Casuumay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Haweenay Dhacdo Murugo badan Kala Kulantay Xuutiyiinta oo Xajka Lagu Casuumay
Aug 11, 2019 - 1 Aragtiyood
Laascaanood ( Kalshaale ) Haweenay lagu magacaabo Alya Zainullah, oo 60 jir ah ayaa ka mid noqotay martida Xajka ee Boqorka Dalka Sucuudiga Salmaan Bin Cabdiasiis.
Haweeneyday ayaa siddeed wiil oo ay dhashay waxaa ay ku weysay gacmaha Kooxda Xuutiyiinta ah ee ka dagaallanta dalka Yemen, ku nooleyd Gobolka Ma’rib ee dalka Yemen,waxaa ay carruurteeda iyo waaliddiintoodii ku dhinteen dagaalka Yemen.
Waxa casuumaad ka heshay Boqor Salmaan,waxaana ay sheegtay in ay aad ugu faraxday markii loo geeyay warqadda casuumaadda ee ay uga mid noqoneyso xujeyda sanadkan.
Alya ayaa sheegtay in Xajka ay waligeed ku taami jirtay hayeeshee dhaqaale darro heysatay darteed aysan awoodin ka qeybgalkiisa.
Sanadkan ayey nasiib u heshay Xajkii ay ku riyoon jirtay,waxaana riyadeedii u rumeeyay Boqorka Sucuudiga oo dhowr kun oo qof sanadkasta ku marti qaada Xajka.
Carruurteeda ayey sheegtay in ay u ballanqaadeen in ay Xajka geynayaan laakiin dhimashada ayaa ka soo hormartay Xajkeeda sida ay sheegtay markii Xuutiyiinta mid muid u kaxeysteen carruurteeda kuna galeen dagaalka ka dhanka Xulufada Sucuudiga.
Dadka sanadkan ku xajiyay martiqaadka Boqor Salaam waxaa ka mid ah Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo in kabadn 3,000 oo qof oo kale.
Ciyaal argagixiso ah ayeey aduunka kusoo kordhisay dhiladaan. Sacuudiga oo u isticmaalo as a tourism, dalxiis camal, dhaqaalo laga sameeyo xajka, waxba uma kordhinayaan daanyeertaan eey dalkeeda iyo hogaamiyayaasheeda gabeen, lug gooyeen. Xaj kulahaa, waa siyaasad waxa nacastaan looga hadlayo.